क्यान ईन्फोटेक : साईबर क्राईमबाट आफ्नो संस्थालाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? – Saurahaonline.com
क्यान ईन्फोटेक : साईबर क्राईमबाट आफ्नो संस्थालाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?
चितवन : चितवनमा जारी सुचना प्रबिधि मेलाको चौथो दिन सुचना प्रविधिको जानकारी तथा अवलोकनलको लागि उत्साहाजनक सहभागिता रहेको छ । गत माघ २४ गतेबाट सुरु भएको मेलाको चौथो दिन अन्तर विद्यालय स्तरिय स्तरीय नितृय प्रतियोगिता तथा साईबर सुरक्षा सेमिनार समपन्न भएको छ भने रोबोटिक्स बिचको फुटबल प्रतियोगिता पनि सुरु भएको छ ।
आज सम्पन्न भएको नृत्य प्रतियोगितामा स्माल ह्यावेन आँपटारी प्रथम, शक्तिखोर ईभर भिजन दित्तिय, सनराईज स्कुल भरतपुर तितृय र शत्तिखोर ईभर भिजनकी कक्षा दुईमा पढ्ने छात्रा प्रकृती रेग्मी सान्त्वना भएकी कम्प्युटर एसोसियसन महासंघ चितवनका उपाध्यक्ष दिलिप तमागंले जानकारी दिए ।
त्यस्तै यता आजनै सुचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोेगसँगै गईरहेको अपराधिक कृयाकलाप तथा सुरक्षा चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राख्दै साईबार सूरक्षा सम्बन्धी सेमिनार सम्पन्न भएको छ । सेमिनारमा आफु कार्यरत संघ संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई कसरी बाचाउन सकिन्छ भन्न बारेमा जानकारी दिईएको थियो । उक्त कार्यक्रममा कम्प्युटर शिक्षक, बैंकर, बिद्यार्थी एवन सहकारीकर्मीको सहभागीता रहेको क्यान चितवनका अध्यक्ष सन्तोष जनक भुषालले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममा थ्राक वानका बिज्ञहरु बिशाल पौडेल, सुमित मानन्धर, प्रशान्त धेवाजु, लगाएतले प्रशिक्षण दिएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रेमराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमा क्यानका केन्द्रिय सदस्य भानू शर्माले मन्तव्य राखेका थिए
‘प्रभु पे क्यान इन्फोटेक २०२० इन एसोसिएसन विथ वर्डलिङ्क नाम दिइएको मेलामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका नौला प्रविधि र उपकरणका साथै नयाँ–नयाँ सफ्टवेयर, सुरक्षा उपकरण र नेपाली प्राविधिकले विकास गरेका प्रविधि प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।
प्रविधि मेलामा सामूहिक रुपमा आउन चाहने सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विद्यालयबाट पत्र लिएर आएमा निःशुल्क प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाइएको सचिब टेकलाल भुषालले जानकारी दिए । संस्थाका अध्यक्ष भुषालका अनुसार भोली भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाले समापन गर्दै हुनुन्छ ।